संसारलाई नै स्तब्ध बनाएका १० तस्वीर (एक पटक हेर्नुहोस) « Himal Post | Online News Revolution
संसारलाई नै स्तब्ध बनाएका १० तस्वीर (एक पटक हेर्नुहोस)
प्रकाशित मिति : २०७४, २७ जेष्ठ १०:०५
एजेन्सी, एउटा तस्वीरमा धेरै तथ्य लुकेको हुन्छ । त्यो तस्वीरले धेरै कुरा बोलेको हुन्छ । दुनियामा केहि यस्ता तस्वीरहरु खिचिएका छन्, जसलाई हेर्दा जो कोहीको आँखा रसाउन सक्छ । यस्ता छन् दुनियाको आँशु खसाउने १० तस्वीरहरु ः
१. एउटा बच्ची, जसलाई गिद्धले कुरिरहेको छ
२. टयांक म्यान
अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको हत्या भएको दुई दिन बितेको थियो । राष्ट्रपतिको हत्या गर्ने ली हार्वे ओसवाल्ड टेक्सस एक नाईट क्लवमा छिरेको दिन उनको हत्या भएको थियो । सो नाईट क्लवका मालिक जैक रुवीले राष्ट्रपतिको हत्या गर्ने हत्यारालाई चिन्ने वित्तिकै गोली हानेर मारेका थिए ।
त्यसैबेला फोटोपत्रकार रोवर्ट एचले गोली हान्ने वित्तिकै फोटो खिच्न भ्याएका थिए । यो फोटोले पनि पत्रकारलाई पुलित्जर पुरस्कार दिलाएको थियो ।
करिव ७५–८० साल अगाडि दुनियामा कालो र गोरो रंगको बहुतै ठुलो समस्या थियो । त्यो बेलाको एक बाथरुमको फोटो पत्रकारले खिच्न भ्याए ।
यो फोटोमा पनि सेता जातिको लागि फाल्टै र काला जातिको लागि अर्को कमोट व्यवस्था गरिएको थियो । यो फोटोमा सेता र काला जातिको विभेद देखाइएको छ । यो फोटोलाई इलियट अर्विटले सन् १९५० मा खिचेका हुन् ।
६. गुमनाम बच्चाको अन्तिम संस्कार
भारतको भोपाल ग्याँस दुर्घटना निकै भयानक थियो । यूनियन कार्वाइड इन्डिया लिमिटेडको ग्याँस लिक हुँदा बस्ती पुरै श्मसानघाट र्झैँ भएको थियो । २ डिसेम्वर १९८४ मा भएको सो दुर्घटनामा ४ हजार भन्दा बढि मानिको ज्यान गएको थियो ।
त्यसबेला मृत्यु भएका एक बालकलाई गाड्नु अगाडि चिहानमा राखेको तस्वीर खिचिएको थियो । त्यसबेला यो तस्वीर अत्यन्तै भाइरल बनेको थियो । यो तस्वीरलाई रघु रायले खिचेका थिए ।
७. द सांघाई बेबी÷ब्लडी सटर्डे
८. २ वर्षे कोसोभो रिफ्युजी
दक्षिण–पुर्वी युरोपमा एक भूमि कोसोभो छ । जसलाई सर्वियाले आफ्नो भूमि मान्दै आएको छ । तर कोसोभो भने आफुलाई स्वतन्त्र बनाउन चाहन्थ्यो । सन् १९९९ मा धेरै कोसोभोका नागरिकहरु अल्वानियामा शरणार्थी भएर जाँदै थिए ।
कोसोभोका नागरिकले अर्को देशमा जानको लागि तारको जालीविचबाट बच्चा लैजाँदै गरेको यो तस्वीर कैरोल गजीले खिचेका हुन् । यो तस्वीरले कैरोललाई पुलिट्जर पुरस्कार समेत दिलाएको थियो ।
९ सिरियाली बच्चाको आत्मसमर्पण
सिरियामा गृहयुद्धले हालत एकदमै खराब बनाईसकेको थियो । २०१४ को डिसेम्वरमा तुर्कमिनिस्तानकी पत्रकार उस्मान सार्गिली एक क्याम्पमा गएकी थिईन् । सो क्याम्पमा उनले एक बच्ची देखिन् र फोटो खिच्नलाई क्यामरा तेर्साइन् ।
तर ति बच्चीले क्यामरालाई बन्दुक ठानिन् र दुवै हात उठाएर आत्मसमर्पण गरिन् । यो फोटोलाई गाजाका पत्रकार नादिया अबु शबनले जब पहिलो पटक सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिन् रातारात भाईरल बन्यो ।
१०. आयलान कुर्दी